Starting Meats and Textures - Somali
Caanaha naaska ama kuwa budada la qaso ah (formula) ayaa ah cunada ugu muhiimsan ee ilmaha yari qaato ilaa 12 bilood jir ay da’adiisu ka soo gaarayso. Hadba sida ilmahaagu diyaarka ugu noqdo u sii cunto adaygeedu kala duwan yahay.
Cunooyinka La Calaliyo
Ilmahaagu wuu ka gudbayaa cuntada la jilciyay wuxuuna u gudbayaa cunto ka adag marka uu koroba. Sii cunto jilicsan oo la shiiday oo ay cadad yaryar/murkudyo ku jiraan ama gawsqabad leh marka ilmahaagu uu hadba dhinac wax ku calalin karo (ma aha oo kali ah kor iyo hoos). Cunooyinkaan ku fiiri:
• Baasto la kariyey
• Baradho la burburiyey
• Tufaax shiidan
• Digir karsan, oo la burburiyey
Marka uu ilmuhu diyaar u yahay, sii cunto la shiiday oo si fiican loo jarjaray. Marka uu ilmahaagu cunooyin farihiisa ama sacabadiiisa ku soo qaato, ee uu cunnada afkiisa geliyo ee uu kadibna calaliyo, diyaar ayuu u yahay ilmahaas in la siiyo cunooyinka faraha lagu soo qaato. Ilmaha yaryari sida cunooyinka faraha loogu soo qato in ay tababar ku qaataan ayey jecel yihiin! Ku fiiri ilmaha in aad siisid:
• Hilib la shiiday
• Furutada gesacadeysan
• Gobolo ama qaybo ah furuto bislaatay oo jilicsan
• Buskutka yaryar ee adag (crackers)
• Khudrad la kariyay oo jilicsan
• Cereal qalalan
Haddii aad doorato cunto ah hilbaha caruurta la siiyo, dooro kuwo aan waxba lagu darin, oo la ridqay/raqday ama la jilciyay. Hilibkaasi wuxuu leeyahay borootiin badan marka loo eego cunooyinka isku qassan. Tusaale ahaan, 5 dhalo oo ay ku jiraan baasto cunada ilmaha ah ayaa u dhiganta 1 dhalo oo hilib digaag oo isku cadaadsan.
Hadii aad doorato in aad siisid hilibka reerka intiisa kale ay cunayaan, shiid ama si yar yar u jarjar kuna dar biyo yar, caanaha naaska ama caanaha bududa ah oo qasan. Hilibka in sidaas la yeelo ayey ilmuhu ku cuni karaan.
Ku fiiri hal nooc oo hilib cusub ah halkii marba una sug inta uu ilmuhu kala qabsanayo hilibkaas.
Sii cuntooyin kale oo brotiin leh sida bataato ama baradho la shiiday, ukun, jiiska cottage ama jiiska caadiga ah.
Cabitaanada casiirka ah
Ilmaha yaryar uma baahna cabitaanada casiirka ah. Caanaha naaska ama caanaha budada ah ee la qaso ayey ka heli karaan dhamaan fitamiin C ga ayey ilmaha yaryar u baahan yihiin.
Hadii aad doorato in aad ilmahaaga cabitaan casiir ah siisid, sii 2 ounce oo 100% cabitaanka casiir ah ku sii koob maalintii.
Siinta cabitaan casiir ah oo badan waxay keeneysaa koriinsho iyo kobcitaan xumo ilmaha ku yimaada waxayna ka dhigaan ilmaha kuwo aysan cunada, caanaha naaska ama caanaha loo qaso ah aysan baahi u heynin.
Qorshaha wax siinta. Dooro qaybta (liiska dhereran) ugu fiican ilmahaaga. Ilamahaaga yar waxaa dhici karta in uu intaan ka yar ama intaan kabadan uu cuno. Ilmaha u daa in uu cuno inta isagu ku filan. Maalmaha qaarkood ilmuhu wuxuu cuni karaa wax xoogaa badan maxaa yeelay "koriin ayaa ku socdo".
Cuntooyinka la ridqay/raqday ama la jilciyay
Cuntooyinka la jejebiyay/shiiday
Cuntooyin la shiiday/si fiican loo jarjaray
• 2-3 qaadada yar oo furuto la buburiyey ah
• 2-4 qaadada yar qaadada shaaha ah oo cereal ka caruurta ah
• 2-4 qaadada yar oo cereal ka caruurta ah
• Caanaha naaska ama 6-8 wiqiyadood (oz.) oo ah foormulada birtu/feeradu ku jirto.
• 2-3 qaadada cuntada oo ah furuto la jarjaray oo jilicsan
• 2-4 Qaadada cuntada oo ah siiriyaalka sebiyada ama ilmaha yaryar
•2 qaadada yar oo khudaar la kariyey oo la ridqay ah
• 2 qaadada yar oo khudaar la kariyey oo la jejebiyey
• 1-2 qaadada yar ah oo hilib (isu caadisan, shiidan ama jarjaran)
• 2 Qaadada Cuntada oo ah khudrad la kariyay oo la jarjaray
• 1-2 Qaadada cuntada oo ah hilib (la shiiday ama la jarjaray)
Casiryo (qadada iyo cashada dhexdooda)
Koob ku sii 2 oz. oo caanaha naaska ama kuwo budada ama biyo
• Koob ku sii 2 oz. oo biyo ah
• Rooti adag ama Zwieback rootiga la yiraahdo
• 2 wiqiyadood (oz.) oo biyo ah oo koob ku jira
• Siiriyaal qalalan ama Zwieback
• 2 qaadada yar oo khudaar la kariyey oo la ridqay ah
• 2 qaadada yar oo cereal ka caruurta ah
• 2 qaadada yar oo furuto la buburiyey ah
• 1-2 Qaado cunto oo ah furuto la jarjaray oo jilicsan
6-8 oz. oo caanaha naaska ama kuwo budada ah oo feero lagu daray
Caanaha naaska ama 6-8 wiqiyadood (oz.) oo ah foormulada birtu/feeradu ku jirto.